Xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta oo heerkii ugu xumaa gaaray | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home ARRIMAHA SIYAASADDA Xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta oo heerkii ugu xumaa gaaray
Xaquuqada sawirka: Villa Somalia
Muqdisho ( XT) – Waxaa heerkii ugu xumaa maraya xiriirka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dalka isu tagga Imaaraadka Carabta, inkasta oo Muqdisho iyo Abuu dabay ayna wax faah faahina ka bixin xiriirka diblamaasiyadeed ee ka sii daraya. Haddana waxaa cad inuu sii xumaanayey xiriirku tan iyo markii Soomaaliya ay go’aansatay in ay dhex dhexaad ka noqoto xasaradihii siyaasadeed ee ka dhex aloosmay dalalka Khaliijka oo dalalka Imaaraadka, Baxreyn iyo Sacuudi carabiya ay xiriirka ugu jareen dowladda Qadar , islamarkaasna ay ku soo rogeen cunaqabateyn dhinac walba ah.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeyneysaa Imaaraadka in ay faragelin siyaasadeed ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya. Sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo ka gaabsaday in magaciisa la xigto ayaa wargeyska Xaqiiqa Times u sheegay in Imaaraadku ay xiriir gaara oo xukuumadda federaalku waxba kala socon la yeesheen dowlad goboleedyada Soomaaliya arintaasi oo abuuratay in xiisad siyaasadeed ka dhex aloosanto federaalka iyo maamul goboleedyada.
Waxaa mas’uulku intaasi ku daray in xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Imaaraadku cirka isku shareeray kaddib markii Abuu dabay ay heshiis maalgelineed lagashay maamulka Somaliland, kaas oo dhigaya in dekedda Berbera ay imaaraadku maamulaan , dakhliga ka soo baxana ay 40% ay qaadato shirkadda maamulka dekedaha ee Dubay, halka heshiisku uu dhigayo in Somaliland ay leedahay dakhliga dekedda 30%, iyadoo dowladda Itoobiyana loo qoondeeyey 19% halka dowladda federaalka aan waxba laga siin.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si kulul uga jawaabtay heshiiskaasi kuna tilmaantay faragelin qaawan oo lagu sameeyey madaxbannaanida Soomaaliya.
Xukuumadda Soomaaliya waxa ay ka codsatay dowladda Imaaraadka in ay faah faahin ka bixiso heshiiska dekedda Berbera, hasa yeeshe, weli Abuu dabay kama soo jawaabin codsigaas.
Xaalka oo intaasi maraya ayaa waxaa uga sii daray kaddib markii Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya uu ansixiyey mooshin lagu diidayo in shirkadda maareysa dekedaha Dubay ay ka shaqeyso dalka Soomaaliya.
Waxaa markale xiriirka labada dal, aad u xumaaday markii xukuumadda Soomaaliya ay shaaca ka qaadday in ay ku qabatay garoonka Muqdisho 8-dii bisha Abriil diyaarad siddey lacag doolarka mareykanka ah oo tiradeeda lagu sheegay 9.6 milyan ( sagaal milyan iyo lix boqol oo kun oo doolarka maraykanka ah).
Xukuumadda Soomaaliya ma xusin cidda lacagtu u socotay iyo halka ay ka timid toona, hasa yeeshee waxaa wararku ay caddeeyeen in Safiirka dowladda Imaaraadka u fadhiya Soomaaliya Maxamed Cuthmaan uu tegey garoonka diyaaradaha una sheegay mas’uuliinta garoonka in lacagtaan loo wadey ciidamada Soomaalida ee imaaraadku tababaro ayna ahayd mushaaraadka ciidamada iyo tababarayaalkooda.
Dowladda Imaaraadka, ayaa war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda laguna faafiyey wakaaladda wararka imaaraadka , ayaa waxaa lagu canbaareeyey ciidamada ammaanka Soomaaliya oo imaaraadku ku eedeeyeen in ay hakiyeen duulimaadkii diyaarad gaara oo ay saarnaayeen 47 cidanka imaaraadka ah isla markaasna ay ciidanka Soomaalidu la wareegeen lacagtii mushaarka ciidamada Soomaaliya iyo tababaryaalkooda. Dowladda Soomaaliya waa ay beenisey in warkaas oo idil. War ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa waxaa uu ku baaqay in laqaboojiyo xiisadda wada xaajoodna lagu dhmameeyo ismaan dhaafka siyaasadeed.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga doonayaa madaxda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta in ay si deg deg ah u wada gaaraan is afgarad siyaasadeed, waayo sinnaba uma kala maarmi karaan, dhinac walba dano ayaa isaga xiran ,labada shacabna uma dulqaadan karaan in khilaafku sii socdo.
Xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadku waa ka fac weyn yahay siyaasiyiinta majaraha haatan u haya labada dal.
Previous articleMaxaa reer Muqdisho ciqaabta ku muteysteen?
Next articleMa Ogtahay Madaxweyne?